AutoCAD, မြို့ပြ 3D နှင့်အခြား AutoDesk ထုတ်ကုန်ကိုအသုံးပြုသည်
Bentley Institute ၏ထုတ်ဝေမှုများအပြင်အတွင်းပိုင်း MicroStation CONNECT Edition
အင်ဂျင်နီယာ၊ ဗိသုကာ၊ ဆောက်လုပ်ရေး၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု၊ ပထဝီ ၀ င်နေရာနှင့်ပညာရေးအသိုင်းအဝိုင်းများတိုးတက်စေရေးအတွက်ခေတ်မီဖတ်စာအုပ်များနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ရည်ညွှန်းစာပေများကိုထုတ်ဝေသည့် EBentley Institute Press မှထုတ်ဝေသည် "Inside" MicroStation CONNECT Edition” ကိုယခုစာအုပ်နှင့် e-book ဖြင့်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေနိုင်သည်။
Bentley Systems က CAD Microstation
AutoCAD-AutoDesk, CAD / GIS ဆုံးမဩဝါဒပေး, အင်ဂျင်နီယာ, IntelliCAD, Microstation-Bentley
Plexscape, Plex.Earth®ကိုတည်ဆောက်သူများ၊ ဗိသုကာ၊ အင်ဂျင်နီယာနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးစီမံကိန်းများအားအရှိန်မြှင့်ရန်အတွက် AutoCAD အတွက်လူကြိုက်အများဆုံးကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည့် TEC, Timeviews ™ကိုကမ္ဘာအနှံ့ AEC ဈေးကွက်တွင်ထူးခြားသော ၀ န်ဆောင်မှုကိုစတင်ခဲ့သည်။ AutoCAD အတွင်းရှိစျေးနှုန်းချိုသာပြီးအလွယ်တကူရရှိနိုင်သည့်နောက်ဆုံးပေါ်ဂြိုဟ်တုပုံရိပ်။ မဟာဗျူဟာမြောက်မိတ်ဖက်အပြီးတွင် ...
အခမဲ့ AutoCAD သင်တန်း - အွန်လိုင်း
ဤသည်မှာ AutoCAD အခမဲ့အွန်လိုင်းသင်တန်း၏အကြောင်းအရာဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်ဆက်တိုက်အပိုင်း ၈ ခုပါ ၀ င်ပြီး၎င်းတွင်ဗွီဒီယို ၄၀၀ ကျော်နှင့် AutoCAD မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုရှင်းလင်းစွာဖော်ပြထားသည်။ အပိုင်း ၁ - အခြေခံသဘောတရားအခန်း ၁ - Autocad ဆိုတာဘာလဲ။ အခန်း ၂။ Autocad မျက်နှာပြင်မျက်နှာပြင်အခန်း ၃ - ယူနစ်များနှင့်ညှိနှိုင်းမှုများအခန်း ၄ - parameter များ
ပထဝီအင်ဂျင်နီယာတွင်အသစ်များ - AutoDesk, Bentley နှင့် Esri
Autodk သည် Revit, InfraWorks နှင့် Civil 3D 2020 တို့ကိုထုတ်ပြန်ကြေငြာခဲ့သည်။ Revit3နှင့် Revit 2020 နှင့်အတူအသုံးပြုသူများသည်ဒီဇိုင်းရည်ရွယ်ချက်များကိုကိုယ်စားပြုပြီးဒေတာများကိုပိုမိုထိရောက်စွာကိုယ်စားပြုသည့်ပိုမိုတိကျသောနှင့်အသေးစိတ်စာရွက်စာတမ်းများကိုဖန်တီးနိုင်လိမ့်မည်။ ပိုမိုချောမွေ့နှင့်အတူစီမံကိန်းများ၏ပူးပေါင်းခြင်းနှင့်ဖြန့်ဝေ။ ကူညီသည်။
AutoDesk Bentley Systems က ESRI
ArcGIS-ESRI, AutoCAD-AutoDesk, တီထွင်မှု, Microstation-Bentley
Timeviews - AutoCAD ဖြင့်သမိုင်းဝင်ဂြိုလ်တုပုံရိပ်များကိုကြည့်ရှုရန်ပလပ်အင်
Timeviews သည်အလွန်စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသော plugin တစ်ခုဖြစ်သည်။ AutoCAD မှသမိုင်းဝင်ဂြိုဟ်တုပုံရိပ်များကိုနေ့စွဲများနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်များအတွက်ခွင့်ပြုသည်။ ဂူဂဲလ်ကမ္ဘာမှဒေါင်းလုပ်လုပ်ခဲ့သည့်ဒီဂျစ်တယ်ပုံမော်ဒယ်လ်ရှိခြင်းယခုthisရိယာ၏သမိုင်းဝင်ပုံများကိုကျွန်ုပ်တွေ့မြင်လိုပါသည်။ ၁။ စိတ် ၀ င်စားသည့်Selectရိယာကိုရွေးချယ်ပါ။ လုပ်ငန်းစဉ်သည်ရိုးရှင်းပါသည်။ ...
မှတ်, လိုင်းများနှင့် Excel ကိုကနေ AutoCAD တစ်ဦးအနား၏စာသားကို Draw
ငါ Excel မှာဒီသြဒီနိတ်၏စာရင်းရှိသည်။ ဤအရာများတွင် X ကိုသြဒီနိတ်, Y ကိုသြဒီနိတ်နှင့် vertex များအတွက်နာမည်လည်းမရှိ။ ကျွန်တော်အလိုရှိသည်မှာ၎င်းကို AutoCAD တွင်ရေးဆွဲရန်ဖြစ်သည်။ ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် Excel ရှိ concatenated text တစ်ခုမှ scripts များကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်။ အချက်များထည့်သွင်းခြင်းအတွက် command တစ်ခုထပ်မံတည်ဆောက်သည်။
Transoft Solutions နှင့် Plexscape Google Earth အပေါ်မော်တော်ယာဉ်များပိုမိုလက်တွေ့ကျကျကိုယ်စားပြုပူဇော်ဖို့မဟာမိတ်လုပ် 3D
Transoft Solutions Inc. သည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအင်ဂျင်နီယာဒီဇိုင်းနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုဆော့ဖ်ဝဲတွင်ကမ္ဘာ့ ဦး ဆောင်သူဖြစ်ပြီး Plexscape၊ Plex.Earth®၏ developer များ၊ ဗိသုကာ၊ အင်ဂျင်နီယာနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးစီမံကိန်းများကိုအရှိန်မြှင့်ရန်အတွက်လူကြိုက်အများဆုံးကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ (AEC) ။ ပူးပေါင်းမှု၏အဓိကအချက်မှာAutoTURN®နည်းပညာကိုပေါင်းစပ်ခြင်းဖြစ်သည်။
အကောင်းဆုံးဆောက်လုပ်ရေးဆော့ဖ်ဝဲ - ၂၀၁၈ ဆောက်လုပ်ရေးကွန်ပျူတာဆုများ
ဤသည်ပြိုင်ပွဲသည်ဗိသုကာပညာ၊ အင်ဂျင်နီယာနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးကိုအဓိကထားသောဆော့ဖ်ဝဲလ်၏အကောင်းဆုံးကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုကိုဆုချခြင်းဖြစ်သည်။ ဤနောက်ဆုံးစာရင်းသည်ပထ ၀ ီအင်ဂျင်နီယာအတွက်တွက်ချက်မှုဆိုင်ရာဖြေရှင်းချက်များ၏အဓိကပံ့ပိုးသူများအကြားပြိုင်ဆိုင်မှုသည်၎င်း၏ ၁၃ ကြိမ်မြောက်ထုတ်ဝေမှုတွင်မည်သို့ဖြစ်သည်။ လွယ်ကူချောမွေ့စေရန်ကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်သောအမှတ်တံဆိပ်အချို့ကိုမတူညီသောအရောင်ဖြင့်မှတ်ပြီးပါပြီ။
AutoDesk Bentley Systems က
AutoCAD-AutoDesk, တီထွင်မှု, Microstation-Bentley
Wms2Cad - WAD ၀ န်ဆောင်မှုများကို CAD ပရိုဂရမ်များနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်သည်
Wms2Cad သည်ရည်ညွှန်းရန် CAD ပုံဆွဲခြင်းသို့ WMS နှင့် TMS ဝန်ဆောင်မှုများကိုယူဆောင်ရန်ထူးခြားသောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်ဂူဂဲလ်ကမ္ဘာနှင့် OpenStreet မြေပုံမြေပုံနှင့်ရုပ်ပုံဝန်ဆောင်မှုများပါဝင်သည်။ ၎င်းသည်ရိုးရှင်းလွယ်ကူမြန်ဆန်ပါသည်။ သင်ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသော WMS ၀ န်ဆောင်မှုစာရင်းမှမြေပုံအမျိုးအစားကိုသာရွေးချယ်ပါသို့မဟုတ်သင်၏စိတ်ဝင်စားမှုကိုအနက်ဖွင့်နိုင်သည်။
AutoDesk Google Earth ကို
AutoCAD-AutoDesk, Google Earth / Maps ကို, IntelliCAD, Microstation-Bentley
ကြှနျတေျာ့အတှေ့အကွုံ Cadastre များအတွက် Google Earth ကိုသုံးပြီး
ကျွန်ုပ်သည် Google search engine မှ Geofumadas သို့လာသည့်သော့ချက်စာလုံးများတွင်တူညီသောမေးခွန်းများကိုမကြာခဏတွေ့ရသည်။ ဂူဂဲလ်ကမ္ဘာကိုသုံးပြီးကတ်စထရက်လုပ်နိုင်မလား။ Google Earth ပုံတွေဘယ်လောက်တိကျသလဲ။ အဘယ်ကြောင့်ကျွန်ုပ်၏စစ်တမ်းသည် Google Earth မှ offset? သူတို့ငါ့ကိုဘာအပြစ်ပေးမလဲ
cadastre Google Earth ကို KML PlexEarth
AutoCAD-AutoDesk, cadastre, Google Earth / Maps ကို
တစ်ဦး CSV ဖိုင် Excel ကိုထံမှသြဒီနိတ်ဆွဲ AutoCAD
ငါလယ်ပြင်သို့သွားပြီ, ငါပုံဆွဲမှာပြထားတဲ့အတိုင်းအိမ်ခြံမြေ 11 မှတ်၏စစ်တမ်းကောက်ယူကြပါပြီ။ ထိုအချက်များအနက်မှ ၇ ခုသည်မြေလွတ်မြေရိုင်း၏နယ်နိမိတ်များဖြစ်ပြီးလေးထပ်သည်အိမ်၏ထောင့်များဖြစ်သည်။ ဒေတာများကိုဒေါင်းလုပ်ချသောအခါ၊ ၎င်းကိုကော်မာသီးခြားဖိုင်အဖြစ်ပြောင်းသည်။
AutoCAD 2018 ကိုဘယ်လို download ဆွဲမလဲ - ပညာရေးဆိုင်ရာဗားရှင်း
Las versiones educativas de AutoCAD son totalmente funcionales, tanto para estudiantes como para docentes. Para descargar AutoCAD versión estudiantes, se debe seguir los siguientes pasos: 1. Accederala página de AutoDesk. Ingresasatu cuenta o creas una nueva. Se debe elegir el enlace de descarga de versión educativa: https://www.autodesk.com/education/free-software/autocad Ene este caso, estoy…
AutoCAD သို့ spreadsheet paste အလိုအလျောက် update လုပ်ရာ
ကျွန်ုပ်တို့သည်အချက်သို့ရောက်နိူင်သော်လည်း Office Importer သည် Excel spreadsheet တစ်ခုသို့မဟုတ် Word file တစ်ခုနှင့်ချိတ်ဆက်နိုင်သည့် tool တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းညွှန်ပြခြင်း၊ ၎င်းသည်မူလဖိုင်ကိုပြုပြင်သည်နှင့်အညီ၎င်းသည် dynamically update လုပ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသမိုင်း အကောင့်အဖြစ် Brendan Haggerty ငါ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ် ...
Webinar: သင် CAD ဆော့ဗ်ဝဲနဲ့လုပျနိုငျ5အကောင်းဆုံးအရာမြား
သင့်တွင်အစီအစဉ် ၄၅ ခုပါရှိပြီး၊ Microsoft Office ရှိဇယားတစ်ခုနှင့်သက်ဆိုင်သောအချက်အလက်များကိုစာရွက်နံပါတ်၊ အတည်ပြုသူ၊ အတည်ပြုသည့်နေ့စသည်တို့ပါဝင်သော Layout တွင်သေတ္တာများသို့မဟုတ် module များပါရှိသည်။ တဖန်သင်တို့တစ် ဦး ချင်းစီတ ဦး တည်းဖွင့်လှစ်ရန်မလိုဘဲ, ထိုလေယာဉ်အားလုံးပြောင်းလဲမှုလျှောက်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်အတွက်ဒေတာကိုပြောင်းလဲ ...
သွင်းကုန်အချက်များနှင့် CAD ဖိုင်ထဲမှာဒစ်ဂျစ်တယ်မြေပြင်အနေအထားမော်ဒယ် generate
ဤကဲ့သို့သောလေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခု၏အဆုံးမှာကျွန်ုပ်တို့ကိုစိတ် ၀ င်စားစရာမှာမျဉ်းရိုးတစ်လျှောက်ဖြတ်ကူးသည့်အပိုင်းများကိုထုတ်လုပ်ရန်၊ ဖြတ်ကူးရန် volumes များ၊ တာတမံများသို့မဟုတ်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုတွက်ချက်ရန်ဖြစ်သော်လည်းဤအပိုင်းတွင်ဒစ်ဂျစ်တယ်မြေမျက်နှာသွင်ပြင်ပုံစံ၏မျိုးဆက်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရလိမ့်မည်။ အချက်များကိုမည်သည့်အချိန်တွင်တင်သွင်းမည်၊
AutoCAD-AutoDesk, အသားပေး, topografia
စာမျက်နှာ 1 စာမျက်နှာ2စာမျက်နှာ3... စာမျက်နှာ 14 နောက်စာမျက်နှာ